Le christianisme, lsquowhawydopium des malgaches – Malag@sy Miray
« Adin’ny maizina sy ny mazava »
« Aza manonononompoana ny anaran’Andriamanitra »
Mampalahelo ny fahitana fa zimbazimbain’ny mpanao politika ny maha « kristianina » azy. Impiry moa no voatonona ny anaran’Izy Tompo tao anatin’ity tolona ity. Impiry moa ny andaniny sy ny ankilany fa sitraka sy nosoavin’Andriamanitra amin’ny zavatra ataony ho an’ny tenany sy ho an’ny vahoaka Malagasy.
Kristianina ny tena ka tsy mahatanty izany fanaovana tsinontsinona ny anaran’Andriamanitra sy ny filazana fa efa notsofina rano daholo ny zavatra natao. Fa iza marina ary ilay Andrimanitr’izy ireto? Jeso Kristy ve?
Somary nahataitra ny rehetra, na ny avy ao amin’ny andaniny na avy amin’ny ankilany, ny fiakaran’andriamatoa Jacques Sylla teny amin’ny 13 mai. Tsiahivina fa Praiministra tao amin’ny fitondrana Ravalomanana ary filohan’ny Antenimieram-bahoaka eny Tsimbazaza izy ity. Ary tsy vao ela fa izy ito ihany koa no nanolotra hevitra an-dRavalomanana ny tsy ahatongavany teny amin’ny Le Hintsy Ambohimanambola tamin’ny alarobia roa herinandro izay. Izay no nahatonga ny fanafintohinan’ny vahoaka ka nampirongatra ny tolona.
Hevitra avy any amin-dRavalomanana mba hanakorontanana ny hetsi-bahoaka ve izy ity sa efa tetika hamitahana ny filoham-pirenena? Na ny iray n any iray dia ratsy avokoa satria tsy fanana hazon-damosina sy famadihana izany.
Mampalahelo fa dia matim-bola sy matim-boninahitra ny mpanao politika malagasy ka tsy menatra mivadibadika amin’izay hevitra sy firehana nananany. Tsy vao izao io fa efa hatramin’ny faha-mpanjaka. Misy mantsy ireo fianakaviana izay tsy afaka esorina eo amin’ny fitondrana na iza na iza mpitondra nifanesy. Ary na handatsahan-drà aza izany rehetra izany dia atao izay hisisihana sy hitadiavana toerana. Raiki-tampisaka ao an-tsain-dramalagasy kely mantsy fa raha te hana-karena eto Masagasikara dia tsy maintsy maka fahefana ary miditra ao amin’ny fitondrana. Eo andaniny dia mba tsy hanakorontanan’ny mpitondra ny orinasa ananana. Eo ankilany kosa dia entina mampihorohoro sy ampitahorana ny mpiara-belona. Izany no tena antsoina hoe tsy rariny.
Mampalahelo hoy aho fa entanina amin’ny lamesa sy fiombonam-bavaka ny hetsika rehetra mitranga eto amin’ny firenena na any amin’ny fianakaviana. Misy ny tsy tena amin’ny fony, misy ny manao satria fombafomba ihany fotsiny izany. Matoa mitranga izao loza sy korontana misy eto amin’ny firenena izao dia misy kapoka sy sazy avy any amin’Andriamanitra tokony hahatsapantsika tena sy hifona sy hibebaka hiverina aminy. Maro ireo fisehoana sy famantarana eno tetsy sy teroa talohan’izao fotoana izao izay tsy noraharahina ka nampilatsaka an-katerena ny vahoaka. Mahatsiaro menatra ny tenako fa tsy mendrika ary tsy mendrika avokoa ireo vahoaka Malagasy sy ny mpitondra rehetra nifanesy nisy teto amintsika. Tsy ny fiainana eto no tena izy fa ny Fiainana Mandrakizay ka aoka samy tena hiraiki-po amin’Izy Tompo fa tsy fombafomba fanao sy fahazarana fotsiny fa raha tsy izany aloe tsy manao toy izay voatarika sy voafitaka amin’ny fahotàna satria tsy kely lalana ny ratsy.
15 mars 2009 à 10:23
Izaho no Tompo Andriamanitrao, aza manana Andriamani-kafa ianao.
Hitako aloha fa tena tsy mety marina ny mampiasa ny fivavahana ho fitaovana, ho fampandriana adrisa ny vahoaka malagasy.
Ho an’i Monseigneur Odon marie Arsène Razanakolona, tsy afaka ary tsy mahazo miteny amin’ny anaranao manokana intsony ianao satria ianao no solon-tenan’ny mpino Katolika romana rehetra manerana ny nosy ka izay teny teneninao na zavatra ataonao dia tokony hiray fo sy saina ary fanahy amin’ny mpino rehetra miaraka aminao ianao.
Ny Eglizy no mitondra fampianarana eken’ny mpino ary ny mpino kosa dia misy teny entiny miakatra ho fanatsarana ny fiainam-pireneny ary ireny ihany no tokony teneninao.
Ny hevitrao manokana, tompoko, dia tsy afaka ambaranao amin’ny anaranao intsony fa amin’ny anaranan’y fiangonana ary amin’izay fotoana izay dia tokony izay teny ieran’ny mpino katôlika rehetra toy ny mpisolo vava ianao.
15 mars 2009 à 17:20
c’est vraiment choquant en effet de voir combien les dirigeants malgaches exploitent la foi de leur partisans ou sympatisans par quelques mots pseudo-religieux placés ici et là.
Tena iainanareo tokoa ve izany sa lahady mivavaka dia alatsinainy mangalatra akoho? Mba mieritrereta e! samy ho tsaraina amin’izay vitany ety ambonin’ny tany anie ny velona sy ny maty any andro iray.
16 mars 2009 à 9:12
Soa ihany fa ny ankamaroan’ireo olona sosotra amin’ny fihetsik’i Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona dia ny mpino katolika, ary ny ankamaroan’ireo olona mieritreritra fa manao fitaovana ny fivavahana Atoa Filoha Lefitry ny FJKM dia ireo mpino FJKM ihany. Mba farafaharatsiny aloha famantarana izay fa tsy ho tafiditra eto amintsika ny adim-pinoana.
18 mars 2009 à 16:13
Tiako tsindrina aloha fa tsy manohitra ny fivavahana ny tenako saingy tsy manaiky kosa ny fanaovana tsinintsinona ny fivavahana sy ny vaovao mahafaly.
Maro ireo olona amin’izao fotoana ohatra no lazaina fa mpivavaka marina nefa ireo karazana fombafomba atao any amin’ny « tenue maçonnique » aza dia efa maro no mifanohitra amin’ny voalazan’ny baiboly sy mifanipaka amin’ny maha-kristianina. (post à venir)
15 mai 2009 à 11:22
Za aloha raha ny evitro dia tsotra mitana ny maha ray aman-dreny azy i MGR RAZANAKOLONA ODON raha manao ireny fihetsika ireny te hampilamina ny tany izy , fa ny olona very tombotsoa no sorena amin’ny fihetsiny toy ireny , tsoriko aloha fa tsy mbola nahita olona sahy niteny ny marina toa azy za ka noho izany dia manohana azy hatramin’ny farany ny tenako ; aza tezitra izay mamaky io soratro io an! io no marina ka tsy zakan’ny olona demony
Solidarité pour Manakana II [5 mois après l'incendie]